25 Common Windows 10 Olana sy ny Ahoana no nanamboatra azy ireo | Caseguru
#1 Windows 10 System takiana
Izany no kokoa ny Ny teny fampidirana, fa zava-dehibe ny mahafantatra raha te-hisorohana ny olana tsy ilaina amin'ny fametrahana. Ny solosaina mila ho hatramin'ny le amin'ny sasany fitsipika. Ity ny specs Microsoft dia mitaky:
A processeur ny 1 gigahertz (gHZ) na haingana
1 gigabyte (GB) (32-kely) na 2 GB (64-kely) RAM
16 GB ny kapila mafy maimaim-poana toerana
Microsoft DirectX 9 sary fitaovana amin'ny WDDM mpamily
Ny kaonty sy ny Internet Microsoft fidirana
#2 Windows 10 Tsy télécharger
Windows 10 Tsy télécharger
Ireo mpampiasa izay manana Windows 7, 8 na 8.1 dia tokony ho afaka télécharger Windows 10 avy hatrany amin'ny alalan'ny fanindriana ny upgrade kisary ao amin'ny rafitra lovia eo amin'ny taskbar. Na izany aza, mpampiasa sasany efa sarotra tamin'ny Download, na dia tsy mbola nahazo lalana télécharger izany mbola (Microsoft no manankina avy upgrades tsikelikely toy izany ny Internet tsy hotapahiny).
Amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra, dia nihaona ny olana amin'izao fotoana izao, satria ny fanontana ny Windows dia tsy tena vaovao, ka nihazakazaka Windows Update mamaha ny olan'ny.
Tokony izay tsy, dia afaka miasa manerana ny olana amin'ny alalan'ny fampiasana ny Microsoft Windows 10 Download fitaovana haino aman-jery. Ho télécharger un .ISO antontan ny fandidiana rafi-, izay azo feno amin'ny USB fiara na ny DVD mba dia mametraka rafitra ny fandidiana miainga amin'ny.
#3 Windows 10 Activation olana
Windows 10 Activation olana
Angamba no olana lehibe indrindra fa ny mpampiasa no mitatitra ao am-piandohan 'Windows 10 dia sarotra amin'ny activating ny rindrankajy rehefa efa nametraka. Sarotra ny sary an-tsaina ny olana lehibe kokoa noho izao, ary mazava ho azy izany dia niteraka ny sasany fa testy valiny ao amin'ny Internet Forums ny andro farany na dia.
Na izany aza, mahakivy aza ny olana fampahavitrihana Azo antoka ny, ao ny raharaha Windows 10 azo atao ny hamaha azy ireo somary painlessly. Tokoa, Microsoft dia nilaza ampahibemaso fa misy ireo olana mifandraika amin'ny fampahavitrihana raha ny marina dia tokony hamaha ny tenany ao anatin'ny minitra vitsy. Izany no ankapobeny voalaza ho ny raharaha eo amin'ny Windows 10 fiaraha-monina, fa ny sasany mpampiasa manana olana maharitra Na izany aza za-draharaha. Hisy foana ny ara-dalàna amin'ny famoahana rindrambaiko be pitsiny ity, na, ary isalasalana ny tokony hatao lalana ho an'ireo mandia zava-manahirana izany fotsiny mba hametraka sy miezaka indray.
#4 Windows 10 Automatic vaovao
Windows 10 Automatic vaovao
Be dia be ny olona no naneho ahiahy momba ny Microsoft ny vaovao politika vaovao. Updates an'i Windows 10 tsy maintsy, mba tsy hifidy amin'ny misintona sy ny fametrahana azy ireo. Izany dia tokony hoe manana milamina rindrambaiko amin'ny fiarovana ny farany tampina sy ny fanamboarana, fa indraindray dia ny handeha hiteraka olana. Efa nahita isika glitches sy nianjera vokatry ny ady eo amin'ny Windows Vaovao farany sy Nvidia mpamily, aza ny olana haingana dia voafaritra. Ny hafahafa bibikely-tsokosoko amin'ny Microsoft ny fitiliana dia tsy azo ihodivirana.
Raha loha tsy mahazo manao izany Microsoft fanohanana pejy hahita torolalana ho an'ny uninstalling ny mpamily na tsy ilaina Vaovao farany. Ianao ihany koa ny mahita ny "Asehoy na manafina ny vaovao" troubleshooter fonosana. Download izany, hanokatra izany, paompy Afeno ny vaovao farany, ary avy eo hijery ny vaovao farany tsy te-hametraka avy hatrany. Afaka miverina hatrany izany taty aoriana, ary mikaroka Asehoy miafina vaovao ary na inona na inona ianao uncheck efa nanapa-kevitra ianao te-hametraka araka izay rehetra.
Azonao ampiasaina ny Firewall mba hanakana ny fanavaozana asa fanompoana sy tsy ho afaka fanavaozana avy hatrany. Ny olana amin'ny Microsoft izany dia manana politika ny fanapahana eny fahazoana vaovao ho avy raha tsy manaiky ny vaovao izay tonga amin'ny alalan'ny ao anatin'ny iray volana. Access dia haverina raha taty aoriana hanaiky ny vaovao manakana anao, ka mety mbola ho fomba hividianana fotoana mba hahitana ny fomba tsy miovaova ny vaovao dia.
#5 Windows 10 Feo olana
Windows 10 Feo olana
Raha manana olana amin'ny fametrahana ny Realtek mpamily, tsy mahazo ny feno traikefa-peo amin'ny VIA HD Audio, na manana olana amin'ny Conexant teny, misy workaround ho anareo mba hanandrana.
Andeha isika hijery ireo olana ao amin'ny mifamadika telo mba. Ny olana amin'ny Conexant teny dia midika fa mba handre tsy hatanjaka amin'ny Windows 10 na dia ny zava-drehetra hita mba ho miasa tsara. Raha izany no ho fanadihadiana, Microsoft-kevitra mandeha msconfig.exe sy hizotra ho any amin'ny fanombohana vakizoro. Tsindrio ny bokotra safidy Advanced, jereo ny Maximum fahatsiarovana boaty ka nametraka ny vidiny ho 3072.
Raha manana VIA HD Audio ka hahita fa afaka ihany no mandre feo avy amin'ny sasany fampiharana, misy hafa workaround ho anao. Open Playback fitaovana, marina tsindrio ny raki-peo Output fitaovana, ary nataony araka ny Default fitaovana. Miaraka nataony izany, mifidy ny fitaovana, hira Properties, nifindra tany amin'ny Enhancements kiheba sy manamarina ny Protestant enhancements rehetra safidy.
Farany, Raha azom-pahoriana ianao miaraka amin'ny olana Realtek teny mpamily fametrahana — indrindra ny 0x000005b4 fahadisoana — dia afaka manandrana ny workaround nivoaka tao amin'ny Stone Support Library. Misy Torolalana ho an'ny fampiasana Group Policy Editor mba hanome ny mpamily intsony mba hametraka, na dia afaka misintona ny lisitra antontan mba hametraka ny toe-javatra vaovao eo amin'ny toerana tamin'ny roa potsitra. Raha vao natao ity, afaka dia indray miezaka ny mpamily fametrahana.
#6 Windows 10 voatery mahatonga rafitra vaovao farany fianjerana
Olana iray hafa vokatry ny fanerena ny vaovao farany dia ny hoe afaka hidona ny solosaina.
Rebooting ny solosaina dia tokony mandamina izany amin'ny raharaha amin'ny raharaha fototra. Ianao uninstall koa ny mpamily izany miteraka olana.
#7 Windows 10 Chrome olana
Windows 10 Chrome olana
Maro ireo mpampiasa ihany koa ireo olana tany am-boalohany Mitatitra ny Chrome navigateur. Na dia Microsoft dia nanandrana ny aterineto repackage ny ezaka niraoka ahitra ny famoahana ny Edge navigateur, Mbola isalasalana izany vaovao ratsy ho an'ny orinasa. Chrome dia nahazo maro ny lazany amin'ny hardcore mpampiasa aterineto, ary izao no indrindra ny karazan-olona izay mety ho efa voajanahary natao tany am-boalohany ao amin'ny Windows adopters rafitra miasa.
Indrisy anefa, Chrome maro ireo mpampiasa navigateur rehetra dia miaina raft ny olana, amin'ny bogging sy slowdowns ny rindrankajy raisina indrindra manjaka. Toa ho an'ny sasany downloaders ny Chrome navigateur, processeur-asa mafy toy ny mitanjozotra lahatsary dia tsy miasa tsotra izao, araka izay tokony ho.
Izany dia ho olana tokoa izay miasa amin'ny Microsoft rehefa mandeha ny fotoana, fa ny tany am-boalohany ho an'ny rehetra Chrome workaround olana za-draharaha dia ny hamono fanitarana rehetra mifandray amin'ny navigateur. Toy ny olana rehetra mifandray amin'ny Windows 10, ny soso-kevitra ny uninstalling ary reinstalling Chrome ihany koa dia malaza iray, ary ny teknika tsotra izay afaka manampy hanamaivana misy olana.
#8 Windows 10 voatery mahatonga ny rindrambaiko vaovao farany fifandonana
Windows 10 voatery mahatonga ny rindrambaiko vaovao farany fifandonana
Ny vaovao farany dia amin'ny alalan'ny voatery lavitra ny trickiest lafiny Windows 10. Mbola olana iray hafa izay afaka mitranga dia rehefa misy Windows Vaovao farany mifanojo amin'ny antoko fahatelo mpamily iray fitantanana ny rindrambaiko vaovao. Izany no mahatonga ny loza. Ny antoko fahatelo rindrambaiko azo nijanona, fa ny Windows vaovao tsy afaka.
Ny tsara indrindra dia uninstall Bet antoko fahatelo mpamily fitantanana sy mamela Windows mikarakara ny rehetra ny rafitra vaovao, izay manome Microsoft-pahefana ny iray toko kosa ny vokatra.
#9 Windows 10 Levona favoris
Windows 10 Levona favoris
Internet Explorer no iray amin'ireo tena tapa-rindrambaiko niteny ratsy eto amin'izao tontolo izao, ary tsara tarehy be i Microsoft adidiny ny vaovao farany izany haingana fa tsy taty aoriana. Tsy mahagaga avy eo fa efa namoaka vaovao Edge navigateur, ary ny tany am-boalohany valin fandaharana ity dia noho izy be kokoa noho ny Internet Explorer nodimbiasany.
Na izany aza, Efa za-draharaha mpampiasa sasany olana toerana, ny lisitry ny favoris, izay heverina ho nifindra ny mivantana avy amin'ny efa misy Internet Explorer Bookmarks. Na izany aza, amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra izany dia famantarana fotsiny olana. Mba toerana Favorites amin'ny Edge, ilaina fotsiny dia ny hanokatra ny sakafo, ary avy eo tsindrio 'Settings'. Horonan-taratasy any amin'ny 'Import Favorites’ navigateur hafa, mifidy ny navigateur izay ampiasaina taloha, ary farany manindry 'Import'. Izany no tokony hamaha ny olana avy hatrany.
#10 Windows 10 Cortana tsy miasa
Windows 10 Cortana tsy miasa
Ny sasany Windows 10 mpampiasa no manana olana mahazo Cortana miasa. Ny olona sasany dia nahazo hafatra fa Cortana tsy ampy amin'ny faritra na fiteny, na dia ao amin'ny faritra nanohana sy mampiasa ny teny nanohana. Ny hafa indray dia nahita Cortana tsy momba ny Default, na tsy miasa araka ny tokony ho.
Voalohany indrindra, voa Start > Cortana > Notebook ary afaka Toggle Cortana amin'ny sy eny.
Jereo ao amin'ny Toe-javatra > Time & fiteny. Tokony mba hahazoana antoka fa ianao mampiasa ny iray amin'ireo fiteny ireo - Sinoa (Simplified), Anglisy (U.K.), Anglisy (U.S.), Anarana iombonana amin'ny, Anarana iombonana, Alemaina, ary espaniola, ary miteny ny teny entana no fahefana. Ianao koa mila ny firenena na ny faritra ho Shina, Frantsa, Alemaina, Italia, Espaina, Fanjakana Mitambatra, na ny United States.
#11 Windows 10 OneDrive placeholders lasa
Windows 10 OneDrive placeholders lasa
Microsoft no nanova ny fomba fanompoana ny rahona tahiry, OneDrive, miasa ao amin'ny Windows 10. Be dia be ny olona no sosotra ny mahita fa placeholders, izay ankapobeny previews ny rakitra tsirairay voatahiry ao amin'ny rahona, efa nesorina. Toa valy, no nanaovana izany, satria ny olona sasany dia very hevitra noho ny placeholders ary nieritreritra ny antontan-taratasy eo an-toerana dia notehirizina. Ny ankehitriny rafitra mifototra amin'ny mifidy handrindra, izay tsy sitraky ny olona sasany izay tia ho afaka fampitahana matetika rakitra tsirairay, indrindra rehefa miasa amin'ny saim-petsy voafetra ny toerana fitahirizana.
Mandehana amin'ny tranonkala navigateur Ary ho hitanao ny antontan-taratasy tsirairay izay tianao.
Afaka sarintany ho toy ny fiara ao amin'ny tahiry mpikaroka tany vaovao. Miditra ho OneDrive eo amin'ny navigateur ary tsindrio eo Files dia handika ny isan'ny Cid (izany dia hanao hoe Cid = arahina maro ao amin'ny adiresy Bar). Izany ohatra ny hoe aoka voalaza Cid = 435rty. Open File Explorer, any amin'ny Ity PC, ary kitiho Map tambajotra fiara, mifidy taratasy ary apetaho eo "ny https://d.docs.live.net/435rty". Aiza 435rty no isan'ny Cid. Reconnect amin'ny famantarana-in tokony anglisy. Ianao mila sonia amin'ny, fa ianao dia ho afaka miditra ny OneDrive amin'ny alalan'ny File Explorer, fa ho fampitandremana - dia somary miadana.
Fanamarihana : Izany no asa mbola amin'ny fandrosoana, ka raha ny zava-dehibe aminao, lazao ny OneDrive ekipa momba izany. Afaka manao soso-kevitra ao amin'ny OneDrive namany Sary. Mety mitondra placeholders na hafa indray amin'ny ho avy vaovao.
#12 Windows 10 Fampirimana tsy
varavarankely 10 Folder tsy
Ny sasany tany am-boalohany Windows 10 mpampiasa no soso-kevitra fa Windows 8 dia ambony noho ny rafitra miasa vaovao amin'ny lafiny iray. Ny mailaka fampiharana izay no anisan'ny Windows 10 ankehitriny dia tsy mamela ireo mpampiasa mba hamorona subfolders, rehefa nikarakara efa misy mailaka. Na dia azo heverina ho zavatra tsy misy dikany ny olana maro mpampiasa, misy amin'izao fotoana izao tsy misy vahaolana ny olana.
#13 Windows 10 Mail olana
Maro no efa previewed Windows 10 milaza fa Windows Mail hita ao amin'ny dikan- 8.1 i ambony. Ny antony dia satria afaka mamorona folders sy ny subfolders, izay tsy afaka manao amin'ny Mail rindrambaiko ao amin'ny Windows 10 (raha kely indrindra toy ny ankehitriny). Ny olona izay te hanao bebe kokoa mailaka customizing mampiasa Thunderbird fa tsy, izay miasa tsara amin'ny Windows 10.
#14 Windows 10 mihoatra passante fanjifana olana
Windows 10 mihoatra passante fanjifana olana
Ao amin'ny Windows 10 Update Delivery Optimisation mampiavaka izay afaka ny Default. Ny olana dia mampiasa avy hatrany io-miasa maro be solosaina sy ny aterineto passante ao mba mampita vaovao amin'ny hafa Windows 10 PC mpampiasa
Windows 10 mpampiasa dia afaka misafidy ny manually hiverina-eny ny endri-javatra, amin 'izany notazonina passante lehibe ho an'ny asa lehibe. Mba deactivate Windows Update Delivery Optimisation, manaraka ny dingana etsy ambany:
Dingana 1: Open Settings
Dingana 2: Fitetezana ho amin'ny Windows Update fizarana
Dingana 3: Select Advanced
Dingana 4: Safidio ny Mifidiana fomba fanavaozam-baovao Efa voavonjy fifantenana
Dingana 5: Mametraha Toggle ho Off
Taorian'ny fametrahana Windows 10, mpampiasa dia tokony mahita fa ny Get fanavaozam-baovao avy amin'ny Microsoft, ary mahazo ny vaovao farany avy any, ary mandefa ny vaovao farany ho any no nametraka ny Default ho eo an-tanako an-toerana PCs tambajotra, ary PCs amin'ny aterineto.
Microsoft no nilaza fa ny Windows Update Delivery Customisation endri-javatra dia tsy voatery ho ela-nidina ny miaramila ny aterineto PC fifandraisana, fa mbola ampiasaina ihany no voafetra passante.
#15 Windows 10 Fifandraisana olana
Windows 10 Fifandraisana olana
Ny sasany Windows 10 ireo mpampiasa ihany koa ireo mitaraina fa Wi-Fi no manapaka avy tsy tapaka. Tsy mahazatra amin'ny rafitra misy miasa na milina, fa izany no toetry ny Windows 10 nisy olana amin'ny reconnection. Izany no tena tsy nisy olana vitsy indrindra manerana maro dikan-ny Windows, ary manamboatra azy io dia mitaky tsotra fotsiny reboot. Izany no olana aloha amin'ny Windows 7 ary Windows 8, ary ny zavatra izay tokony ho tapa-kevitra ao amin'ny somary tsotra lamaody.
Misy ihany koa ny milaza ny sasany tany am-boalohany adopters ny Windows 10 fa ny disabling Wi-Fi fizarana Wireless ahafahan'ny fifandraisana mba ho be kokoa milamina. Izany dia tsy workaround fomba ofisialy voamarin'ny Microsoft, fa raha toa Wi-Fi ho olana dia disabling anjara amin'ny Windows 10 Mety ho fohy ezaka vahaolana.
#16 Windows 10 Wi-Fi miovaova, miadana, na tsy mifandray
Windows 10 Wi-Fi miovaova, miadana, na tsy mifandray
Maro ny Windows 10 mpampiasa dia mitatitra ny olana amin'ny Wi-Fi. Ho an'ny olona sasany dia miadana na intermittently latsaka ny fifandraisana, ny hafa dia manana olana nahazo Wi-Fi hiasa amin'ny rehetra.
Atombohy avy amin'ny fihodinana ny router ko sy ny solosaina eny, ary tamin'ny indray.
Raha tsy afaka mahazo Wi-Fi hiasa amin'ny rehetra dia mety manana olana mpamily. Hamarino amin'ny tambajotra adaptatera mpanamboatra sy hahazoana antoka fa manana ny farany mpamily. Mety tsy maintsy misintona izany amin'ny solosaina hafa ary hametraka izany amin'ny alalan'ny flash USB.
Ataovy azo antoka fa ny router ko koa ny farany firmware. Ianao mahita azy eo mpanamboatra ny namany Sary.
Mandehana any Toe-javatra > Network & Internet > Wifi. Ataovy azo antoka fa ny Connect avy hatrany boaty no ampy ho an'ny tambajotra tianao ny mifandray amin'ny.
Mandehana any Toe-javatra > Network & Internet > Wifi > Fitantanana Wi-Fi toe-javatra > Fitantanana fantatra tambajotra sy mifidy ny tambajotra, dia tsindrio Manadino. Reboot ny milina, ary hiditra ao amin'ny tambajotra antsipirihany mba mifandray vaovao.
#17 Windows 10 mizara ny Wi-Fi amin'ny fifandraisana
Windows 10 mizara ny Wi-Fi amin'ny fifandraisana
Misy hatrany ny fifandanjana mba ho hita eo amin'ny tsy hanahirana sy ny fiarovana, fa ny sasany, rehefa Microsoft efa nivadika ny faritry ny vaovao Wi-Fi Sense endri-javatra. Ny hevitra fototra dia ny hoe tsy manome mora sy mandeha fomba mba hizara ny Wi-Fi tenimiafina (tanteraka misy mari-pamantarana) amin'ny fifandraisana ninonoanao tao amin'ny Outlook, Skype, na Facebook. Ny olana dia mba tsy te-hanome ny fidirana ny Wi-Fi tambajotra tena amin'ny olona rehetra amin'ny Facebook "namana".
Mandehana any Toe-javatra > Network & Internet > Wifi > Fitantanana Wi-Fi toe-javatra ary afaka Toggle tambajotra fizarana eny, na misafidy ny ahitana Outlook, Skype, na Facebook.
Azonao atao koa ny manapa-kevitra raha mba hifandray amin'ny tambajotra nozarain'i ny fifandraisana amin'ny eto, izay zava-dehibe, satria, araka ny Microsoft hoy, "Tsarovy, tsy ny rehetra Wi-Fi tambajotra dia azo antoka. "
Raha mampanahy dia momba ny orinasa tambajotra, na ny olon-kafa amin'ny tambajotra tsy opting avy, dia afaka ihany koa ny manampy ny lahatsoratra "_optout" ny tambajotra anaranao (SSID), fa milaza izany Microsoft afaka andro maro noho ny tambajotra mba hanampy ho amin'ny nisafidy-avy lisitra ho an'ny Wi-Fi Sense.
#18 Windows 10 Bluetooth tsy miasa
Windows 10 Bluetooth tsy miasa
Maromaro Windows 10 mpampiasa dia manana olana mahazo miasa araka ny tokony ho Bluetooth. Mety hisy fiantraikany ny fitendry, voalavo, headphones, ary ny zavatra hafa izay mampifandray ao amin'ny solosaina alalan'ny Bluetooth.
Mandehana any Toe-javatra > Fitaovana ary ho azo antoka fa Bluetooth no toggled amin'ny.
Ataovy azo antoka fa ny Bluetooth fanampin-javatra tanteraka voampanga ary ianareo dia dingana manaraka ny pairing. Indraindray tsy maintsy mihazona nidina bokotra mba hahatonga ny fitaovana discoverable. Jereo miaraka amin'ny mpamokatra ho an'ny antsipirihany.
Misy vintana fa ara-dalàna izany dia olana mpamily. Ianao te-hijery ny mpanamboatra fa manana ny farany mpamily, indrindra fa raha ianao mitsambikina avy hatrany amin'ny Windows 7 amin'ny 10.
Vitsy ny olona no nitatitra fa uninstalling ny mpamily fa ny fitaovana ianao manana olana amin'ny, rebooting ny milina, ary avy eo dia namela Microsoft mamantatra avy hatrany izany, ary mametraka ny mpamily dia hanao ny fitaka.
#19 Windows 10 Printer tsy namaly
Windows 10 Printer tsy namaly
Raha, rehefa avy fampiakarana lenta, hitanao fa ny printy tsy miasa, dia mety tsy maintsy hanomboka ny rehetra dingana fametrahana ny.
Mba hahazoana antoka seamless fifandraisana, ny zava-drehetra, dia ny mpamily ny miaraka Hardware, tokony havaozina mialoha ny fampiakarana lenta. Ataovy azo antoka ianao mampiasa mpanao pirinty izany mifanaraka amin'ny Windows 10.
#20 Windows 10 Tsy afaka manokatra Windows Store na tsy afaka misintona fampiharana
Windows 10 Tsy afaka manokatra Windows Store na tsy afaka misintona fampiharana
Toa toy ny hoe maro ny olona no mihazakazaka ho olana amin'ny Windows Store rehefa avy fanavaozana ny Windows 10. Ho an'ny olona sasany dia tsy hisokatra amin'ny rehetra, ho an'ny hafa tsy azo atao ny manaporofo ny tena misintona fampiharana na rindrambaiko vaovao. Misy vintana fa ny tara fampiharana alaina sy fanavaozam-baovao dia be vokatry ny lohamilina, Fa misy ny sasany ny zavatra azonao manandrana:
Press Windows + R ary avy eo dia nitendry exe ao anaty boaty sy ny asa fanaovan-gazety Ampidiro. Raha tsy miasa dia hamafa ny Download filaharana ary miezaka indray. Ny olona sasany milaza fa niasa ho azy ireo rehefa hitadiavan'ny vitsivitsy.
Raha toa ka tsy afaka miditra ny Windows Store amin'ny rehetra mety ho satria manana ny diso napetraka faritra. Mandehana any Toe-javatra > Time & fiteny ary ho azo antoka no nametraka azy ho any amin'ny firenena tena ianao amin'ny.
Izany ihany koa ny tokony Fantaro tsara izay tsy teo ny toe-javatra diso fotoana. Jereo ao amin'ny Toe-javatra > Time & fiteny ary ho azo antoka tsara toa rehetra.
#21 Windows 10 Edge dia tsy hitanjozotra mozika rehefa Nohamaivaniny
Windows 10 Edge dia tsy hitanjozotra mozika rehefa Nohamaivaniny
Satria Edge rehetra izao dia fampiharana, ny asa dia mihantona rehefa ny Nohamaivaniny. Izany no tena manelingelina rehefa mitanjozotra ianao mozika eo amboniny.
Tsy misy vahaolana ho an'ny izany, ka ianao tsy maintsy mivantana fotsiny ny mozika avy amin'ny loharano hafa, raha kasainao mahahaino izany rehefa mampiasa ny fitaovana ho an'ny asa hafa.
#22 Windows 10 Mamitaka touchscreen
Windows 10 Mamitaka touchscreen
Mpampiasa sasany previewing Windows 10 eo amin'ny alalan'ny fitaovana entin-milaza fa ny touchscreen fahaizana dia tsy toy ny avy hatrany Functional araka izay tokony ho. Ohatra, dia mora ny hanadino ny sisin'ny varavarankely, rehefa miezaka mba hisintona azy, ary ny sasany amin'ireo sary masina kely loatra ny hahatakatra amin'ny fanandranao pad.
Indrisy anefa, izany fotsiny ny toetry ny biby. Misy tsy tena hafa be noho ny fomba fanao izay hanampy anao handresy izany olana finicky.
#23 Windows 10 Manelingelina pop-dehibe
Windows 10 Manelingelina pop-dehibe
Farany, ireo mpampiasa ny media sosialy dia nitatitra fa rehefa miezaka ny hametraka Windows 10 fa izy no nifanena ny tena mahasosotra hafatra. Io pop-ny varavarankely manome ny sasany amin'ireo torohevitra mahasoa indrindra fa ny orinasa rindrambaiko no mbola nanolotra misy ny mpampiasa. Ny varavarankely amin'ny fanontaniana tsotra izao milaza fa "Nisy zavatra nitranga", ary avy eo dia Novelabelarin'i ity hevitra amin'ny filazana fa “Nisy zavatra nitranga – Microsoft – Nisy zavatra nitranga. "
Mazava izany efa nihaona fifaliana be sy ny mahatsikaiky-famoronana ao amin'ny haino aman-jery sosialy, fa na dia teo aza ny adihevitra sy ny voly fa maro ny olona no tokony homarinana avy amin'ny fahadisoana ity, amin'ny fampiharana dia tsy tena olana goavana. Circumnavigating ity olana ity, satria tsy raharaha uninstalling sy reinstalling ny rindrambaiko, ary ao amin'ny ankamaroan'ny tranga nisy ny tsy famerenana ity Marina fa tsy tian'ny ankizy hafatra.
#24 Windows 10 voatery mamorona vaovao farany vavahadin-tserasera ho an'ny junkware
Windows 10 voatery mamorona vaovao farany vavahadin-tserasera ho an'ny junkware
Windows 10 dia tsy manome safidy ireo mpampiasa raha ny rafitra vaovao. Tsy tonga dia mandray azy ireo. Amin'ny lafiny iray izany dia manampy ny solosaina mandehandeha ny raharaha ny fanavaozana mifanaraka amin'izany. Miantoka ihany koa fa ny solosaina dia niakatra ho any daty fiarovana tampina, fa mandeha ho azy fanavaozana mahatonga Microsoft mba hanery-hamahana saika na inona na inona tiany anaty ny mpampiasa ny PC na finday fitaovana.
Tsy misy tena tsy misy vahaolana ho izany, raha tsy hiditra Windows 10 Enterprise, Ny raharaha Microsoft vahaolana izay mamela ireo mpampiasa mamela na mandà vaovao.
#25 Windows 10 tsy afaka intsony
Windows 10 tsy afaka intsony
Izany izay tsy misy ny olana tahaka ny ny fanahy fampitandremana. Windows 10 ho hita toy ny afaka upgrade saingy herintaona. Rehefa afaka izany, dia retails ny $119.
Herintaona mahatsapa toy ny ela, fa eto amin'izao tontolo izao ny teknolojia izany ny indray mipi-maso, ka tsy nataony izany hanatsarana eny fa ela loatra … mbola ampy fotsiny ny hamela ny voalohany kinks atao ironed avy.
varavarankely Windows 10 Previous PostNy Next Samsung Galaxy Smartphone Ho Nambara Aogositra faha-13Next Post Caseguru Products ianao tia, Ihany koa azo jerena ao amin'ny Amazon.com! Related Posts
15 Olana miaraka amin'ny Samsung Galaxy S6 / S6 Edge – Ahoana no mba hanamboarana Azy Ireo
Jolay 4, 2015
Galaxy S6 sisiny Iron Man Limited Edition – Official Unboxing
Jolay 1, 2015
iPhone 6 Screen Replacement atao amin'ny 5 minitra
Jona 25, 2015
Samsung Galaxy S3 Glass Screen Replacement fanamboarana Change
Fanampin'anarana	Adiresy Mailaka
Tips sy ny Tutorials
Pin izany Share